(The Best English Magazine, October 2013)
နတ်မင်းတစ်ပါးမှာ မြင်းတစ်ကောင်ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီမြင်းဟာ လှပသလို အခြားကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အချင်းတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် မြင်းဟာ အစစအရာရာ ပြည့်စုံချင်ခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် မြင်းဟာ သူမကို နှိုင်းယှဉ်လို့မရအောင် လှပချင်နေခဲ့ပါတယ်။
တစ်နေ့မှာတော့ မြင်းဟာ နတ်မင်းကြီးကို ပြောဆိုလာပါတယ်။ “အို အရှင်…အရှင်ဟာ ကျွန်မကို အလှအပတွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အခြားကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အသွေးတွေကိုလည်း ပေးခဲ့ပါတယ်။ အရှင့်ကို အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရှင် ကျွန်မကို ပိုပြီးလှပအောင် ပြုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ အရှင်သာ ကျွန်မကို ပိုပြီးလှပလာအောင် ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် အလွန်အမင်း ကျေးဇူးတင်မိမှာပါ။ ”
နတ်မင်းကြီးက ပြောဆိုပါတယ်။ “အသင်ကို ပိုပြီးလှပအောင် ပြုလုပ်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။ အသင်ဟာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုး ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုတာ ပြောပြပါ။”
မြင်းက ပြောဆိုပါတယ်။ “ကျွန်မ အချိုးမကျဘူးလို့ ထင်နေမိတယ်။ ကျွန်မလည်တံဟာ အတော်ကို တိုလွန်းတယ်။ အရှင်သာ ကျွန်မလည်တံကို အနည်းငယ်ပိုရှည်အောင် ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ကျွန်မရဲ့ အပေါ်ပိုင်းဟာ အတော့်ကို လှပလာပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မခြေထောက်တွေ ပိုပြီးရှည်အောင်၊ ပိုပြီးသေးသွယ်အောင် ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ကျွန်မကိုယ် အောက်ပိုင်းလည်း ပိုပြီးတော့ လှပလာပါလိမ့်မယ်။
“ဖြစ်စေ”လို့ နတ်မင်းကြီးက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် နတ်မင်းကြီးဟာ မြင်းကို ကုလားအုတ်ပုံစံမျိုး ဖန်ဆင်းလိုက်ပါတယ်။ မြင်းဟာ အလွန်အမင်း စိတ်ပျက်သွားပြီး အော်ငိုပါတော့တယ်။ “အို…အရှင်၊ ကျွန်မ ပိုပြီးတော့ လှပချင်တာပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဒီပုံစံကြီးက လှပနိုင်ပါ့မလဲ”
နတ်မင်းကြီးက ပြောဆိုပြန်တယ်။ “အသင် တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်း အတိအကျ ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာပဲလေ။ အသင်ဟာ ကုလားအုတ်တစ်ကောင် ဖြစ်သွားပါပြီ။”
မြင်းဟာ အော်ငိုပါတယ်။ “အို မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မ ကုလားအုတ်တစ်ကောင် မဖြစ်ချင်ပါဘူး။ မြင်းတစ်ကောင်သာ ဆက်ဖြစ်ချင်တာပါ။ လူတိုင်းက မြင်းတစ်ကောင်အဖြစ်သာ ကျွန်မရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ချီကျူးပြောဆိုကြပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ ကုလားအုတ်တစ်ကောင်အဖြစ် ကျွန်မကို ချီကျူးပြောဆိုလိမ့်မယ် မထင်ပါဘူးရှင်”
နတ်မင်းကြီးက ပြောဆိုပါတယ်။ “အသင်ကို ဖန်ဆင်း ပေးထားတာထက်ပိုပြီး ရရှိဖို့ ဘယ်တော့မှ မကြိုးစားပါနဲ့။ အသင့်ဆန္ဒသာ ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် အသင်ဟာ အချိန်တိုင်း ပိုပြီးတော့ အလိုကြီးလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အကျိုးရလဒ် ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ် ဆိုတာကိုတော့ အသင် မျှော်မှန်းမထားခဲ့ပါဘူး။ ပိုပြီးရှည်တဲ့ လည်တံနဲ့ ခြေချောင်းတွေ အလိုရှိမယ်ဆိုရင် အသင်ဟာ ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲ ဖြစ်လာမှာပါ။ ငါ ဖန်တီးပေးထားတဲ့ သက်ရှိတိုင်းမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ ကုလားအုတ်ဟာ အသင်လောက် မလှပပေမယ့်လည်း အလွန်လေးလံတဲ့ ဝန်စည်စလည်တွေကို သယ်ဆောင်နိုင်သလို ကြီးမားတဲ့ တာဝန်သိစိတ်လည်း ရှိနေပါတယ်။
The horse cried, “Oh no, I do not want to becomeacamel. I wish to remainahorse. Asahorse, everybody appreciated my good qualities. Nobody will appreciate me asacamel.”
Posted by နေလင်းအောင် at 5:05 PM